ရီစရာ Archives - Page2of3- YomaLan
အပျိုကြီးလာတုန်းက သူ့ခြင်ထောင်ထဲကို သခွါးသီးတွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
“ရွာသူတစ်​​ယောက်​​ရေးတဲ့စာ” ကိုသာအေး ” ” ဟေ …!! ဘာလဲ မိန်းမ ? ” ” ရွာက ရှင့်ညီမဆီက စာလာတယ် …
ကျမ အိပ်ပျော်လုလု အချိန်မှာ သူရောက်လာတယ် တနေကုန်အလုပ်မှာ ပင်ပန်းထားတော့ ကျမအရမ်းအိပ်ချင်နေပြီ။ သူ့ကို တွန်းလှန်ဖို့ရာ အင်အားမရှိဘူး သူက . . …
ငရဲပြည် ကတောင် လက်မခံရဲတဲ့ ဆရာမ
“ဟဲ့ မောင်မင်းတို”့ “ငရဲပြည် တံခါးဝ အလှည့်ကျလာတာက ဘယ်သူတုန်းဟဲ့” “မှန်လှပါအရှင် ” “ငရဲပြည် တံခါးဝ အလှည့်ကျလာသူက အဖြူအစိမ်း ဝတ်လို့ လူ့ပြည် …
အားးးး ​အော်​သံကြား​ပေမဲ့ဒါသဘာဝပဲ​လေဆိုပြီးအိမ်​သားများမသိချင်​​ယောင်​​ဆောင်​​နေလိုက်​သည်​​မင်္ဂလာဦီးည​ပေးကိုးးးးး​အော်​သံကြားပြီးသိပ်​မကြာလိုက်​လူပြိုကြီး​င​နောင်​အသံနက်​ကြီးဖြင့်​“အ​မေနဲ့အ​ဖေတို့​ရေလာကြပါဦီးဘာဖြစ်​သွားလဲမသ်ိဘူး´´ “ဟာဒုက္ခ​တော့များပြီနဲ့တူတယ်​ ​ယောက်ျား​ရေ​တော့သားကိုသွားကြည့်​ဦီး´´သိပ်​မကြာလိုက်​အ​ဖေဖြစ်​သူမှထပ်​​အော်​ပြန်​သည်​“မင့်း​ချွေးမသတိမလည်​​တော့ဘူးဟ ဆရာဝန်​အမြန်​​ခေါ်´´ဘာ​တွေဖြစ်​ကုန်​လဲမသ်ိ ကိုယ်​လဲတက်​မကြည့်​ရဲ ​သွေးသန်​ရဲရဲ​တွေမမြင်​ရဲဘူး အိမ်​ထဲကရုပ်​ရုပ်​သည်းသည်းအသံ​တွေ​ကြောင့်​​​ဘေးအိမ်​ကလူများပါ​ရောက်​လာကြသည်​သိပ်​မကြာလိုက်​ “လမ်းဖယ်​လမ်းဖယ်​ ဆရာလာပြီ´´အ​ဖေကြီးက“မင်းဘာလယ်​လိုလုပ်​လိုက်​တာလဲ ဆရာ့ကို​ပြောပြလိုက်​´´ “ကျွန်​​တော်​ဘာမှမလုပ်​ရ​သေးဘူးဆရာရဲ့ ကန်​​တော့ပါရဲ့ကျွန်​​တော်​ကလဲ ညအိပ်​ဖို့ …
မိန်းမက လင်ငယ်နဲ့ နောက်မီးလင်းနေတုန်း လင်ကြီးက တံခါးကို ဆောင့်ကန်ဝင်လာတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ လင်ငယ်နဲ့ ပက်ပင်းတိုးပါလေရော။ လင်ကြီးက သူ့မိန်းမကို “နင်အပြင်ထွက်နေ သူနဲ့ငါနဲ့ ၂ …
ရေကျော်ပွဲဈေးက ဘိုးတော်ကို လှောင်ပြောင်ကြတဲ့ လူငယ်များရဲ့ ထိတ်လန့်စရာ ဖြစ်ရပ်
ရေကျော်ပွဲဈေးတွင် ဘိုးတော်တစ်ယောက်ဗေဒင်ဟောနေတာကို ဘေးကလူငယ်အုပ်စု၎/၅ယောက်က လှောင်သလိုလိုပြောင်သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာပြောင်နေကြသည်။ ကြာလာတော့ဘိုးတော်လဲဒေါသထွက်လာပြီး “ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ၊ ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် မင်းတို့ဘဝတွေဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ!´´ အဲ့ဒါကို လူငယ်အုပ်စုကမကြောက်တဲ့အပြင် ခွက်ထိုးခွက်လန် …
အသက် ၈၀ အရွယ်အဖိုးအိုနဲ့ မိန်းကလေးငယ်ငယ်လေး ကလေးမရလို့ ဆေးခန်းလာပြသောအခါ
အသက် ၈၀ ခန့်ရှိသော အဘိုးကြီးတယောက်သည် ခပ်ငယ်ငယ်ဇနီးဖြစ်သူအား လက်တွဲလျက် ဆေးခန်းလာပြလေသည်။ လူနာ။ ။ ‘ ဆရာ.. ကျွန်တော် ကလေးရနိုင်မရနိုင် သိချင်လို့ပါ… …
အပျိုပေါက် ကျောင်းသူလေး သုံးယောက် ကျောင်းသွားတက်ရာ လမ်းခုလတ်ရှိ အိမ် တအိမ်တွင် ကြက်တူရွေး တစ်ကောင် မွေးထားသည်။ ထိုကြက်တူရွေးသည် ထိုမိန်းကလေး သုံးယောက် အိမ်ရှေ့မှ …
အလုပ်မတက်ချင်လို့ ပေးကြတဲ့ ရယ်စရာအကြောင်းပြချက်များ
အရမ်းခေါင်းကိုက်နေလို့… (တကယ်က တနင်္ဂနွေညမှာ သောက်တာများပြီး အမူးလွန်နေတာ) တနင်္လာနေ့ကတော့ ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ဒီလိုနေ့မျိုးဟာ အလုပ်သွားဖို့အတွက် အပျင်းဆုံးနေ့ပါပဲ။ ပိတ်ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် ရုံးပြန်တက်ရတာ စိတ်မပါလက်မပါနဲ့လေ။ …
အိမ်ဖော်ကောင်မလေးက ရိုးရိုးအေးအေးလေးနဲ့ တနေ့ကမှ တော ကရောက်လာတာ တစ်ရက်တော့… … သူဌေးလင်မယားရဲ့ အိပ်ခန်းကို သန့်ရှင်းရေး ဝင်လုပ်ပေး နေရင်းနဲ့ သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံတစ်ခု …